စပါးကို နောကျကနေ လိုကျကစားပွီး အနိုငျယူ ခဲ့တဲ့ လီဗာပူးနဲ့ ပကျသကျပွီး ၀နျခံမှု လုပျသှားခဲ့တဲ့ ယူနိုကျတကျ ကွယျပှငျ့ဟောငျး ရှိုငျကိနျး - SPORTS MYANMAR
စပါးကို နောကျကနေ လိုကျကစားပွီး အနိုငျယူ ခဲ့တဲ့ လီဗာပူးနဲ့ ပကျသကျပွီး ၀နျခံမှု လုပျသှားခဲ့တဲ့ ယူနိုကျတကျ ကွယျပှငျ့ဟောငျး ရှိုငျကိနျး
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျးခေါငျးဆောငျဟောငျး ရှိုငျကိနျးက လီဗာပူး အသငျးဟာ မနညေ့က တော့တငျဟမျကို ၂ – ၁ နဲ့ အနိုငျ ရရှိ ခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျမှာ ခနျြပီယံတှလေို ကစား သှားခဲ့ ကွတယျလို့ ယုံကွညျ့ နပေါတယျ။ လီဗာပူးဟာ ဟယျရီကိနျးရဲ့ ၁ မိနဈ ကတညျးက သှငျးယူ ခဲ့တဲ့ ခေါငျးတိုကျဂိုးကွောငျ့ နောကျကနေ လိုကျကစား ခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး ဂြျောဒနျဟနျဒါဆနျ ဟာ ယာဂနျကလော့ ရဲ့ အသငျး အတှကျ ၅၂ မိနဈမှာ volley ကနျခကျြ နဲ့ ခပြေဂိုး ပွနျလညျ ရယူ ပေးခဲ့ပွီး ပှဲခြိနျ ရ၅ မိနဈမှာ မိုဟာမကျဆာလား ဟာ ဆာဒီယို မာနေးကွောငျ့ ရခဲ့တဲ့ ပငျနယျတီနဲ့ ဂိုးသှငျးယူ ခဲ့ကာ ပှဲအပွီးမှာ လီဗာပူး ကို အနျဖီးမှာ ၃ မှတျ ရစေ ခဲ့ပါတယျ။
ဒီရလဒျကွောငျ့ လီဗာပူးဟာ အမှတျပေးဇယား ရဲ့ ဒုတိယ နရောက မနျခကျြစတာ စီးတီး အသငျး နဲ့ ရမှတျ ၆ မှတျ ပွနျလညျ ကှာဟ သှားခဲ့ပွီး ကလော့ ရဲ့ အသငျးဟာ နှဈ ၃၀ မှာ ပထမဦးဆုံး ပရီးမီးယားလိဂျ ဖလား ကို ရဖို့ အတှကျ ဆကျလကျ တိုကျပှဲ ၀ငျနပေါတယျ။ ယူနိုကျတကျ ကစားသမားဟောငျး ကိနျး ကတော့ စပါးကို ဒီလို ခွစှေမျးပွ အနိုငျယူ ခဲ့တဲ့ လီဗာပူးဟာ ခနျြပီယံ အသငျးလို စှမျးဆောငျ ပွသှားခဲ့တယျလို့ ၀နျခံ သှားခဲ့ ပါတယျ။.
ကိနျး က “ဒါမြိုးကို သူတို့ အနနေဲ့ အပတျတိုငျး လုပျပွ သှားရမှာပါ။ မနျစီးတီးဟာ မနကေ့ ရလဒျကောငျးကို ရယူကာ ဒီနမှေ့ာ လီဗာပူးကို ဖိအားတှအေောကျ ကရြောကျ စခေဲ့ ပါတယျ။ လီဗာပူးဟာ ဒါကို တုနျ့ပွနျ နိုငျခဲ့ပွီး ဒါဟာ အရေးကွီးဆုံး လိုအပျတဲ့ အရညျအသှေး ပါပဲ။ သူတို့ အနနေဲ့ ဒီအတိုငျး ဆကျသှား ရမှာပါ။ လီဗာပူးဟာ ဂိုးစောစော စီးစီး ပေးလိုကျ ရတာကွောငျ့ စိတျပကျြလကျပကျြ ဖွဈခဲ့ ပမေယျ့ သူတို့ဟာ အကောငျးဆုံး ပွနျလညျ recover လုပျနိုငျ ခဲ့ပါတယျ။
ဒီအတိုငျး ဆကျသှားဖို့ လိုအပျ ပါတယျ။ ဘယျသူမှ ကိုယျ့ကို ခနျြပီယံဆု လာပွီး ပေးမှာ မဟုတျပါဘူး။ အပတျတိုငျး အပတျတိုငျးမှာ မှနျကနျတဲ့ ရလဒျကို ရဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ကိုယျ့ဘကျက ကောငျးကောငျး ကစား နျိုငျသညျ ဖွဈစေ မကစား နိုငျသညျ ဖွဈစပေေါ့။ သူတို့ဟာ ဒီနမှေ့ာ ရလဒျကောငျးကို ညှဈယူ နိုငျခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတျော တော့တငျဟမျ တို့ ပေးလိုကျ ရတဲ့ ဂိုးတှဟော ခံစဈ ကစားပုံ ညံ့ဖငျြး တာကွောငျ့လို့ ထငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မိနဈ ၉၀ ပွညျ့ နှိုငျးယှဉျ ကွညျ့လိုကျမယျ ဆိုရငျတော့ လီဗာပူး ဟာ ပိုမို ကောငျးမှနျတဲ့ အသငျး ဖွဈပါတယျ။
ခငျဗြားတို့ သိကွလား။ ကြှနျတျော ဒီစကားလုံးကို မပွောခငျြ ပမေယျ့ လီဗာပူး ဟာ ခနျြပီယံ တှလေို ကစား သှားခဲ့ ပါတယျ။ သူတို့ဟာ အကောငျးဆုံး ပွနျလညျ တုနျ့ပွနျ နိုငျခဲ့တဲ့ အပွငျ ပွိုငျဘကျထကျ အမြားကွီး ပိုကောငျးတဲ့ အသငျးလညျး ဖွဈခဲ့ ပါတယျ။” လို့ ဆိုသှား ပါတယျ။
လီဗာပူး ဟာ အဆိုပါ ရလဒျကွောငျ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ၁၀ ပှဲ ကစား ထားပွီး ခြိနျမှာ ရမှတျ ၂၈ မှတျ စုဆောငျး နိုငျခဲ့တဲ့ လိဂျစံခြိနျကို လိုကျမှီ သှားခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါ စံခြိနျကို ရရှိ ခဲ့တဲ့ အသငျး ၃ သငျး စလုံး ကတော့ အဲဒီ ရာသီမှာ ခနျြပီယံ ဖွဈခဲ့ ကွပါတယျ။
စပါးကို နောက်ကနေ လိုက်ကစားပြီး အနိုင်ယူ ခဲ့တဲ့ လီဗာပူးနဲ့ ပက်သက်ပြီး ၀န်ခံမှု လုပ်သွားခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက် ကြယ်ပွင့်ဟောင်း ရွိုင်ကိန်း
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်း ရွိုင်ကိန်းက လီဗာပူး အသင်းဟာ မနေ့ညက တော့တင်ဟမ်ကို ၂ – ၁ နဲ့ အနိုင် ရရှိ ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ချန်ပီယံတွေလို ကစား သွားခဲ့ ကြတယ်လို့ ယုံကြည့် နေပါတယ်။ လီဗာပူးဟာ ဟယ်ရီကိန်းရဲ့ ၁ မိနစ် ကတည်းက သွင်းယူ ခဲ့တဲ့ ခေါင်းတိုက်ဂိုးကြောင့် နောက်ကနေ လိုက်ကစား ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ဂျော်ဒန်ဟန်ဒါဆန် ဟာ ယာဂန်ကလော့ ရဲ့ အသင်း အတွက် ၅၂ မိနစ်မှာ volley ကန်ချက် နဲ့ ချေပဂိုး ပြန်လည် ရယူ ပေးခဲ့ပြီး ပွဲချိန် ၇၅ မိနစ်မှာ မိုဟာမက်ဆာလား ဟာ ဆာဒီယို မာနေးကြောင့် ရခဲ့တဲ့ ပင်နယ်တီနဲ့ ဂိုးသွင်းယူ ခဲ့ကာ ပွဲအပြီးမှာ လီဗာပူး ကို အန်ဖီးမှာ ၃ မှတ် ရစေ ခဲ့ပါတယ်။
ဒီရလဒ်ကြောင့် လီဗာပူးဟာ အမှတ်ပေးဇယား ရဲ့ ဒုတိယ နေရာက မန်ချက်စတာ စီးတီး အသင်း နဲ့ ရမှတ် ၆ မှတ် ပြန်လည် ကွာဟ သွားခဲ့ပြီး ကလော့ ရဲ့ အသင်းဟာ နှစ် ၃၀ မှာ ပထမဦးဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလား ကို ရဖို့ အတွက် ဆက်လက် တိုက်ပွဲ ၀င်နေပါတယ်။ ယူနိုက်တက် ကစားသမားဟောင်း ကိန်း ကတော့ စပါးကို ဒီလို ခြေစွမ်းပြ အနိုင်ယူ ခဲ့တဲ့ လီဗာပူးဟာ ချန်ပီယံ အသင်းလို စွမ်းဆောင် ပြသွားခဲ့တယ်လို့ ၀န်ခံ သွားခဲ့ ပါတယ်။.
ကိန်း က “ဒါမျိုးကို သူတို့ အနေနဲ့ အပတ်တိုင်း လုပ်ပြ သွား၇မှာပါ။ မန်စီးတီးဟာ မနေ့က ရလဒ်ကောင်းကို ရယူကာ ဒီနေ့မှာ လီဗာပူးကို ဖိအားတွေအောက် ကျရောက် စေခဲ့ ပါတယ်။ လီဗာပူးဟာ ဒါကို တုန့်ပြန် နိုင်ခဲ့ပြီး ဒါဟာ အရေးကြီးဆုံး လိုအပ်တဲ့ အရည်အသွေး ပါပဲ။ သူတို့ အနေနဲ့ ဒီအတိုင်း ဆက်သွား ရမှာပါ။ လီဗာပူးဟာ ဂိုးစောစော စီးစီး ပေးလိုက် ရတာကြောင့် စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်ခဲ့ ပေမယ့် သူတို့ဟာ အကောင်းဆုံး ပြန်လည် recover လုပ်နိုင် ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအတိုင်း ဆက်သွားဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ ကိုယ့်ကို ချန်ပီယံဆု လာပြီး ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အပတ်တိုင်း အပတ်တိုင်းမှာ မှန်ကန်တဲ့ ရလဒ်ကို ရဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘက်က ကောင်းကောင်း ကစား နိုင်သည် ဖြစ်စေ မကစား နိုင်သည် ဖြစ်စေပေါ့။ သူတို့ဟာ ဒီနေ့မှာ ရလဒ်ကောင်းကို ညှစ်ယူ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် တော့တင်ဟမ် တို့ ပေးလိုက် ရတဲ့ ဂိုးတွေဟာ ခံစစ် ကစားပုံ ညံ့ဖျင်း တာကြောင့်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိနစ် ၉၀ ပြည့် နှိုင်းယှဉ် ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ လီဗာပူး ဟာ ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ အသင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ခင်ဗျားတို့ သိကြလား။ ကျွန်တော် ဒီစကားလုံးကို မပြောချင် ပေမယ့် လီဗာပူး ဟာ ချန်ပီယံ တွေလို ကစား သွားခဲ့ ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အကောင်းဆုံး ပြန်လည် တုန့်ပြန် နိုင်ခဲ့တဲ့ အပြင် ပြိုင်ဘက်ထက် အများကြီး ပိုကောင်းတဲ့ အသင်းလည်း ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။” လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။
လီဗာပူး ဟာ အဆိုပါ ရလဒ်ကြောင့် ပရီးမီးယားလိဂ် ၁၀ ပွဲ ကစား ထားပြီး ချိန်မှာ ရမှတ် ၂၈ မှတ် စုဆောင်း နိုင်ခဲ့တဲ့ လိဂ်စံချိန်ကို လိုက်မှီ သွားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ စံချိန်ကို ရရှိ ခဲ့တဲ့ အသင်း ၃ သင်း စလုံး ကတော့ အဲဒီ ရာသီမှာ ချန်ပီယံ ဖြစ်ခဲ့ ကြပါတယ်။